मयुर यातायातले राती यात्रु ओरालेर अलपत्र पारे – Rastriyapatrika
मयुर यातायातले राती यात्रु ओरालेर अलपत्र पारे
काठमाडौँ — रात झमक्कै भईसककेको थियो । त्यस्तै ७ बजेर १५ मिनेट गएको थियो क्यार । कलंकीबाट मलाई लोकन्थली जानुपर्ने थियो । धेरैबेर कुरेपछि मयुर यातायात आयो । म खुशी भएँ । सिण्डीकेट तोडन मद्दत गरेको मयुर यातायातको सेवा राम्रो छ भन्ने धेरैतिरबाट सुनेको थिएँ । नयाँ, ठुलो र फराकिलो बस देखेर उभिदा पनि दु:ख नहुने भएर म थप खुशी भएँ ।
एकैछिनमा बस सरर कुदिहाल्यो। बल्खुनेर आईपुगेपछि बसभित्र हल्लाखल्ला भयो। हल्लाको कारण थियो, बस भाडा। खलासीले कलंकीदेखि कोटेश्वरको भाडा २५ रुपैयाँ मागेका थिए। केही यात्रुले भाडा सुची देखाए जति भएपनि दिने बताईरहेको थिए। अरु बसमा त भाडा सुची बस भित्रै टागेको हुन्थ्यो। तर त्यो बसमा त्यस्तो थिएन। भाडा दर भन्दा धेरै भाडा लिएको ति यात्रुको गुनासो थियो। तर खलासी भाडा सुची देखाउने मुडमा थिएनन्।
कुराकानीकै बीचमा खलासीले प्वाक्क भने, ‘खातेहरु भाडामा किचकिच गर्छन्।’ यति भनेपछि एक्कासी हल्ला ठुलो भयो। हात हालाहालकै अवस्था आयो। यात्रुलाई त्यसरी अपशब्द बोलेको सुन्दा मलाई पनि ननिको लाग्यो। त्यसो त सार्वजनिक बसमा यात्रुमाथी सहचालकहरुको अपशब्दको बाण सामान्य छ। तर व्यवसायिक भनिएको मयुर यातायातकै कर्मचारीको मुखबाट त्यस्तो सुन्दा ठिक लागेन।
विवाद बढ्दै गयो। चालकले बल्खु पुलमा घ्याच्च बस रोके र भने, ‘तपाईहरु सबै ओर्लनुस्। मलाई टाउको दुख्यो। यो बस यहाँबाट अगाडी जान्न। यहीबाट फर्किन्छ।’ लौ आपत पऱ्यो। त्यतिबेला साढे सात भईसकेको थियो। सबैलाई गन्तव्यमा पुग्ने हतारो थियो। फेरी पानी पर्लापर्ला झै पनि भईरहेको थियो। अर्को बस पाईने हो वा होईन ठेगान थिएन। यस्तो बेला मयुर यातायातको चालकले अनौठो अड्डी लिएका थिए। हामी यात्रुसँग केही उपाय थिएन। केही बुढा र महिला यात्रु झनै आत्तिएका थिए। के गर्ने कसो गर्ने मैले केही मेसो पाईन।
बस अगाडी नगुडने भएपछि यात्रुहरु बसबाट उत्रिन थाले। सुरुमा सहचालकसँग विवाद भएका ६/७ यात्रुहरु उत्रिए। त्यसपछि पालैपालो अरु पनि। हामी बसको अन्तिम् तिर रहेको केही यात्रु ओर्लिन बाँकी रहेका बेला चालकले बस यसरी हुईक्याए कि बस कहाँ गएर जोतिन्छ जस्तो लाग्यो। हुईकिएको बस एकैचोटी कोटेश्वरमा आएर रोकियो। म डरले त्यही उत्रिएँ। लामो सास फेरें।
सार्वजनिक बसको यो कस्तो चाला होला? यो देशमा सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्ने यात्रुको हैसियतबारे कसले बोल्ला?
म बुझेर कार्वाही गर्छु : अध्यक्ष
पीडित यात्रुको बयान सुनेपछि कान्तिपुरले मयुर यातायात प्रालिका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठलाई सम्पर्क गऱ्यो। अध्यक्ष श्रेष्ठले आईतबार रातीको घटनाबारे थाहा नपाएको बताए। उनले त्यस्तो गरिएको भए त्यो कार्वाही योग्य काम भएको र आफुले घटनाबारे विस्तृतमा बुझेर कार्वाही थालीने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो यातायातका कर्मचारीबाट त्यस्तो व्यवहार भएको हो भने त्यो ठुलो गल्ती हो। त्यस्तो गर्नै नहुने। म बुझेर कार्वाहीको प्रक्रिया थाल्छु।’
(नोट : भुक्तभोगी यात्रुकै अनुरोधमा उनको नाम नदिइएको हो। भिडियोमा देखिने क्यापवाला व्यक्ति सहचालक हुन्। )
– प्रस्तुती : जनकराज सापकोटा